Home Wararka Maxaabiis dib loogu soo celiyey Saldhiga Baladweyne ka dib Fahataadii !
Magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan dhawaan waxaa ku fatahay wabigga Shabeelle taas oo sababtay in dadkii isaga barakacaan guryahoodii.
Fatahaadaas ayaa saameyn ku yeelatay sidoo kale Xambisayadda magaalada oo eedeysanayaan kala duwan ku jireen, waxaana ay sababtay in laga saaro iyada oo loo wareejiyey xarumo kale oo ciidanka xoogga dalka ku leeyihiin Baladweyne.
Hadda oo magaalada dadku dib ugu soo laabteen ayey sidoo kale Saraakiisha ciidanku dib u soo celiyeen Maxaabiistii.
Xeer illaaliye ku xigeenka Maxkamadda ciidanka qeybta 27-aad ee ciidanka xoogga Maxamed Cabdiqaadir Maxamed oo la hadlay Warbaahinta dowladda ayaa sheegay in Xabsigii dhexe ee Baladweyne hadda shaqo fiican laga qabtay taasna sababtay in Maxaabiistii dib loogu celiyey meeshoodii hore.
Taliyaha ayaa dhanka kale sheegay in Maxaabiista noloshadooda qaarkood liidato una baahan yihiin in siwanaagsan looga warqabo.
“Sida aad lasocoto Baladweyne waxaa ku fatahay Wabigga Shabeelle taas waxaa ay sababtay in dadkii isaga baxaan magaalada, dhibaataddu waxaa ay saameysay xabsigii dhexe ee Baladweyne waxaana ka saarnay dadkii ku xirnaa hadda dib ayaan ugu soo celinay kadib markii shaqo laga qabtay.